Ambongadiny mahery asidra mahery cation fifanakalozana resin Mpanamboatra sy mpamatsy | Dongli
Resina asidra mahery vaika
Resins Rafitra Matrix Polymer Vakana manontolo asavondrona Ionic teny Tontolo fifanakalozana Fahafahana (meq / ml ao Na+ ) Votoatin'ny hamandoana toy ny N / A+ Haben'ny potika MG mamontsinaH → Na Max. Lanjana fandefasana g / L
GC104 Gel Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 1.50 56-62% 0.3-1.2
GC107 Gel Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 1.80 48-52% 0.3-1.2
GC107B Gel Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 1.90 45-50% 0.3-1.2
GC108 Gel Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 2.00 45-59% 0.3-1.2
GC109 Gel Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 2.10 40-45% 0.3-1.2
GC110 Gel Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 2.20 38-43% 0.3-1.2
GC116 Gel Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 2.40 38-38% 0.3-1.2
MC001 Macroporous Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 1.80 48-52% 0.3-1.2
MC002 Macroporous Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 2.00 45-50% 0.3-1.2
MC003 Macroporous Poly-styrene miaraka amin'ny DVB 95% R-SO3 N / A+/ H+ 2.30 40-45% 0.3-1.2
Cation asidra mahery
Ny resina fifanakalozana asidra mahery dia karazana resina fifanakalozana cation miaraka amin'ny vondrona asidra sulfonic (- SO3H) ho toy ny vondrona fifanakalozana lehibe, izay azo ampiasaina indray.
Ny fampiasana asidra mineraly tsotra dia mitovy. Ny karazana resina rano manalefaka dia resin fifanakalozana ion asidra mahery. Ny resina karazana catalyst manokana dia tsy maintsy ampiasaina, satria misy ifandraisany amin'ny fitaoman'ny tahan'ny famotsorana ion hidrogenika, ny haben'ny pore ary ny diplaoman-tsampona amin'ny fihetsika.
Amin'ny fampiharana indostrialy, ny tombony amin'ny resin ny fifanakalozana ion dia ny fahaizan'ny fitsaboana lehibe, ny haben'ny decolorization, ny fahaizan'ny decolorization avo, ny fanesorana ion isan-karazany, ny famerenana indray, ny androm-piainana lava ary ny vidin'ny asa ambany (na dia be aza ny vidin'ny fampiasam-bola indray mandeha) . Teknolojia vaovao isan-karazany mifototra amin'ny resin ny fifanakalozana ion, toy ny fisarahana chromatographic, fanilihana ion, electrodialysis, sns., Dia manana ny mampiavaka azy manokana ary afaka manatanteraka asa manokana isan-karazany, izay sarotra atao amin'ny fomba hafa. Ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny teknolojia fifanakalozana ion dia mbola mivoatra haingana.
1. Ny resina fifanakalozana Ion dia misy rano maromaro ary tsy tokony hotehirizina amin'ny rivotra misokatra. Mandritra ny fitehirizana sy ny fitaterana azy dia tokony hajanona mando izy io mba hisorohana ny fanamainana ny rivotra sy ny tsy fahampian-drano ka hiteraka resina vaky. Raha maina ny resina mandritra ny fitehirizana dia tokony alentika amin'ny rano masira mifangaro (10%) ary avy eo alefa miadana miandalana. Tsy tokony hapetraka mivantana ao anaty rano izy io mba hisorohana ny fanitarana haingana sy ny famotehana ny resina.
2. Mandritra ny fitahirizana sy ny fitaterana amin'ny ririnina, ny hafanana dia tokony tazonina amin'ny 5-40 ℃ mba hisorohana ny supercooling na ny hafanana be loatra, izay hisy fiantraikany amin'ny kalitao. Raha tsy misy fitaovana fanamafisam-peo amin'ny ririnina, ny resina dia azo tehirizina anaty rano masira, ary ny fifantohana amin'ny rano masira dia azo faritana arakaraka ny mari-pana.
3. Ny vokatra indostrialy ny resin ny fifanakalozana ion dia matetika misy polymer ambany sy monomer tsy mihetsika, ary koa loto maloto toy ny vy, firaka ary varahina. Rehefa mifandray amin'ny rano, asidra, alkaly na vahaolana hafa ny résin, ireo zavatra voalaza etsy ambony dia hafindra ao anaty vahaolana, misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny effluent. Noho izany, ny resina vaovao dia tsy maintsy atao alohan'ny fampiasana azy. Amin'ny ankapobeny, ny resina dia mivelatra tanteraka amin'ny rano, Avy eo, ny fahalotoana tsy mitambatra (indrindra ny fitambarana vy) dia azo esorina amin'ny asidra hydrochloric 4-5% mampihena, ary ny fahalotoana biolojika dia azo esorina amin'ny alàlan'ny vahaolana natrium hidroksida 2-4%. Raha ampiasaina amin'ny fanomanana fanafody, dia tsy maintsy alemana amin'ny etanol.
Teo aloha: Resina fifanakalozana asidra malemy
Manaraka: Resina fandriana mifangaro